Search Ranking Factors အဆင့်ဆက်စပ်မှု 2013 | Martech Zone
DK New Media မကြာသေးမီကနှင့်အတူအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် ရှာဖွေရေး ငါတို့သည်ငါတို့၏ဤနေရာတွင်အပေါ်တစ် ဦး Affiliate အဖြစ်သူတို့ရဲ့ suite ကိုမြှင့်တင်နေပါတယ် Martech Zone။ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကသူတို့ဟာအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုပါ SEO ဆိုသည်မှာ tools များ အခြားရိုးရာ SEO အချက်များကဲ့သို့လူမှုရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်စွာအာရုံစိုက်နေသည်။
ဂူဂဲလ်မှကောင်းစွာနေရာချထားသည့်ဝဘ်စာမျက်နှာများတွင်တူညီချက်များနှင့်၎င်းတို့သည်အဆင့်နိမ့်သောစာမျက်နှာများနှင့်အဘယ်သို့ကွာခြားသနည်း။ Searchmetrics မှအချို့သောဂုဏ်သတ္တိများတည်ရှိမှုနှင့်အတိုင်းအတာအတွက်ထိပ်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်နေရာများတွင်ပေါ်လာသည့် URL ၃၀၀၀၀၀ ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရလာဒ်များကိုဤဂုဏ်သတ္တိများ (အချက်များ) သည်ဂူဂဲလ်အဆင့် (အသုံးပြုခြင်းနှင့်) မည်သို့ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုပြသသည် Spearman ရဲ့ရာထူးဆက်စပ်မှုကိန်း).
ဤအစီရင်ခံစာသည်ပြည့်စုံပြီးအချက်အလက်များကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းမရှိပါ (ဆက်စပ်မှုနှိုင်းယှဉ် causationအများအပြားကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများပြုသကဲ့သို့။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဓိကထုတ်ယူခြင်းမှာစံသတ်မှတ်ချက်ရှာဖွေခြင်းအလေ့အထများ၏သက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီးလူမှုရေးခွဲဝေမှုနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ဝိုး!
12:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 10
သတင်းစာကောင်းကောင်း လူမှုရေးအချက်ပြမှုနှင့်ဂူဂဲလ်ရေးသားသူများသည် SERP တွင်အဆင့်အတန်းကောင်းရရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များဖြစ်သည်။